सिरहाको सलहेश फूलबारीमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन मात्र फुल्ने अनौठो फूल !
रूखलाई साक्षी मानी विवाह गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल
निशान न्युज बैसाख १, 2076
काठमाडौं । सौन्दर्यको प्रतीक फूल मन नपराउने को होला ? त्यसमा पनि वर्षको एक दिन मात्र फुल्ने त्यो फूल जसलाई श्रद्धा र भक्तिले हेर्ने गरिन्छ । त्यो फूल हेर्न कौतूहलताका साथ आउने आगन्तुकमा नेपालको मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतबाट आउनेको संख्या लाखौँमा रहेको छ ।
इसाको छैटौं÷सातौँ शताब्दीदेखि फुल्दै आएको त्यो चमत्कारी फूल वैशाख १ गतेका दिन बिहानीपख फुल्नु र साँझपख ओइलाएर जानु आफैँमा एउटा आश्चर्य र कौतुहलको विषय बनेको छ । दलितमध्ये अति पिछडिएको दुसाद जातिको कुलदेवता तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पूजनीय रहेको वीरगाथाका वीर पुरुष सलहेशको जीवन गाथासँग जोडिएको त्यो फूल फुल्ने रूख के को हो ।
कसरी यतिका दिनसम्म बाँचिरहेको छ । यस्ता प्रश्न वनस्पतिविद्का लागि अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
प्रदेश नं २ अन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्गको लहानबजारदेखि पश्चिम र मत्स्यपालन केन्द्रदेखि दक्षिणमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक एवम् ऐतिहासिक सलहेश फूलबारीमा प्रत्येक वर्षको पहिलो दिन त्यो दुर्लभ फूल फुल्ने गर्दछन् ।
हारम जातका विशाल रूखमा एक्कासि फूल फुल्नु र वैशाख १ गते साँझपख स्वतः मौलाएर जाने घटना सबैका लागि अविश्वसनीय र कौतूहलको विषय बनेको छ । सलहेश को थिए ? सलहेशको जीवन गाथासँग फूलको के सम्बन्ध रहेको छ । यो जान्नलाई पौराणिककालमा फर्किनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
लोकगाथाका नायक वीर सलहेशको विवाह सीमावर्ती भारतको मधुवनी जिल्लाअन्तर्गत बरुवार भन्ने बलाठपुर निवासी बलाठकी छोरी सामैरसँग भएको थियो ।
आफ्ना पति सलहेशलाई पकडियागढका तत्कालीन राजा कुलेश्वरकी छोरी चन्द्रवतीले आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सलहेशलाई थुनामा राखेको खबर प्राप्त भएपछि सामैर पकडियागढ गई त्यहाँ आफ्ना सहपाठी दीना मालिनीको सहयोगमा सलहेशलाई थुनामुक्त गराएकी थिइन् ।
सलहेशलाई मनमनै हृदयदेखि मन पराएकी दिना मालिनी सलहेशसँग विवाह गर्न नपाउँदा उनले प्रण गर्दै प्रत्येक वर्ष तिम्रो प्रतीक्षामा वैशाखको पहिलो दिन हारमको त्यही रूखमा देखा पर्ने भनेपछि सोही दिनदेखि सलहेशको प्रतीक्षामा प्रत्येक वर्षको वैशाखको पहिलो दिन माला आकारमा मालिनी देखा पर्ने गरेको किंवदन्ती रहिआएको छ ।
राजा सलहेशको गाथासँग जोडिएको महिसोथा, नन महरी पर्वत, छोपरा चौरी, विराटपुर, त्रिवेणीधाम, पकडियागढ, मानिक दहमा प्रत्येक वर्ष परम्परागत रुपमा मेला लाग्ने गर्दछन् । वैशाखको पहिलो दिन फूलबारीमा रहेको हारमको रूखमा सुनाखरी आकारको फूल फुल्ने गर्दछन् ।
जुन फूल हेर्न देश–विदेशबाट लाखौँको संख्यामा दर्शनार्थी आउने गर्दछन् । यही फूल र सलहेश फूलबारीले हालसम्म राजा सलहेशको गाथालाई जीवन्तता दिँदै आएको छ ।
भनिन्छ सलहेश एकै दिनमा मानिक दहमा नुहाउने, फूलबारीमा फूल टिप्ने, सिलहट अखाडामा कुस्ती खेल्ने, कुलदेवीको पूजा गर्ने तथा जनताको पीरमार्का सुन्ने गर्दथे ।
मैसोथा राज्यको राजा सलहेश र उनकी प्रेयसी मालिनी बीचको प्रेमविछोडका लागि प्रसिद्ध रहेको सलहेश फूलबारीमा प्रेमविवाह गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल हुने र सन्तान प्राप्ति हुने किंवदन्ती रहिआएकाले यस फूलबारीभित्र रहेको हारमको रूखलाई युवायुवतीले ‘लभ प्वाइन्ट’ का रुपमा लिएको छ ।
भनिन्छ, युवायुवती बीचको प्रेमकथालाई जीवन्तता प्रदान गर्न फूलबारीमा रहेको सो रूखलाई साक्षी मानी विवाह गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल हुने जनविश्वासअनुरुप प्रत्येक वर्ष सो फूलबारीमा विवाह गर्नेको सङ्ख्या बढदै गएको छ ।
धनकुटामा गरियो विपीको सम्झना
धनकुटा । धनकुटामा ३७औं विपी स्मृती दिवस मनाइएको छ । पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मनोहर ...
रक्षामन्त्री पोखरेल भन्छन्, विप्लवसँग वार्ता हुँदैन
विराटनगर । सरकार र विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच वार्ताको कुरा चलिरहेका बेला सरकारका एक प्र...
देउवा भन्छन्, सरकार नसच्चिए सडकमा उत्रिन्छौं
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार नसच्चिए सडकमा आफूहरु उत्रने चेतावनी द...
१०० किलोग्राम बुद्धचित्तसहित ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ८ बाट प्रहरीले १०० किलोग्राम बुद्धचित्तसहित ४ जनालाई ...
बारामा गोली चल्दा १ को घटनास्थलमै मृत्यु
बारा । बाराको सुवर्ण गाउँपालिका १ बगहीमा गोली चलेको छ । अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट एक जनाको मृत...
यलम्बर पार्कको छतले किच्दा २ जनाको मृत्यु
पाँचथर । निर्माणाधीन यलम्बर पार्कको छत झरेर किच्दा पाँचथरमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पाँचथरको हि...
लोकसेवा आयोगको अत्यन्त जरुरी सुचना
काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले सुचना जारी गर्दै लिखित परिक्षाको प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे...
साम्राज्ञीको यो तस्विर, जसले हल्लायो सबैको मथिंगल